Kurova Net Thread
Yakagadzirwa nenayoni polymer zvinhu zvine basa rakakwana kuita. Iyo ine zvakanakira zvekunyatso kubuda pachena, yakakwirira simba, yakasimba yekudziya mafuta, yakanakisa kudzora kurwisa uye nyore kugadzira, yakagadzika chimiro, diki diki yekuwedzera kuwedzeredzwa, yakanakisa yemagetsi kusimbisa uye kukwegura kuramba, isina-chepfu uye isinganzwisisike.
MH nylon tambo ine yakazara yakanangana neyakavimbika mhando uye nekukurumidza kuburitsa uye inogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi. (senge mhando, ruvara, uremu, kurongedza, nezvimwe.) kuti ienderane nezvinodiwa zvemusika
Spec: ukobvu 0.08-3.0mm
Apex inowanzoiswa neplastiki spool, koni, chubu kana skein, mune 2g-5000g
Nekuda kwesimba rayo rakakura, yakakwirira gloss, yakakura kuwedzera, MH nylon tambo dzinofarirwa nevagadziri vefashoni, inoshandiswa zvakanyanya mu sequin embroidering, chifukidzo, mitambo yemitambo, zvipfeko zvetsika, arab kapeti.
Iyo ndiyo zvakare inowanzo shinda hove tambo, kazhinji muhupamhi hwe0.1mm-0.6mm. Mubati wehove anogona kusarudza ukobvu hwakakodzera uye simba zvichienderana neyakasiyana mvura neredhiyo yekuredza.